Igumbi lokulala eli-1 eliselunxwemeni phambi kweRawai  - I-Airbnb
Igumbi lokulala eli-1 eliselunxwemeni phambi kweRawai 
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguHeykal
Ibekwe phambi kwe Rawai Ibhitshi e Phuket, ngaphantsi kwe-2 km ukusuka Shell Museum okanye Promthep, kuba yindawo efanelekileyo ukuba ukufikelela aluncedo nokuzonwabisa (iivenkile, iihambo isikhephe, bar, iindawo zokutyela, njl ...).
Indawo yokupaka yabucala yasimahla iyafumaneka ukwenza ubomi bakho bemihla ngemihla bube lula.
Le yunithi yomoya inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, indawo yokuhlala enesofa eguqukayo, igumbi lokulala elikhulu elinokufikelela kwigumbi lokuhlambela kunye nebalcony.
- Indawo yokuhlala enezixhobo ngokupheleleyo
- 38 m² amagumbi
I-Rawai Beach, esekupheleni kwezantsi kwesiqithi sasePhuket, ayilona ulwandle olufanelekileyo lokuqubha, kodwa lunikeza iimbono ezintle zeziqithi ezininzi ezingabamelwane kunye nomoya omnandi wendawo.
Yindawo entle ukonwabela ukutya kwaselwandle kwasekhaya kunye nesiqalo esihle sokujonga iziqithi ezingabamelwane.
Njengoko kuhla aye ngasezantsi siqithi, kwicala lasekhohlo lwe pier enkulu yaziwa ngokuba 'angamaGypsy Ilali', apho abalobi elide esekwe ezindlwini kunokuba nezima baziphilisa ukusuka elwandle. Lokuloba, irenti isikhephe kunye nokuthengiswa iintlanzi oonokrwece. Icala lasekunene le-bay yindawo ye-ankile yeenqanawa ezininzi ezinde kunye ne-speedboats.
Rawai Beach zithandwa kakhulu zokutyela zayo ezininzi kwaselwandle, emgceni yonke ecaleni ngaselwandle. Ingxenye best uhlafune amakhuko ibekwe emgangathweni ezifana basekuhlaleni ntoni, amava fun kwaye ngamava ekhumbulekayo
Umbuki zindwendwe ngu- Heykal
Ndihlala ndifumaneka kwiindwendwe zam!
Ndingakunika ulwazi ngefowuni ngaphambili, ngexesha lokuhlala kwakho nasemva kohambo lwakho. Andihlali kwipropathi, kodwa ndihlala imizuzu embalwa ukusuka edolophini ePhuket.
Ndikhona ukukunceda nangaliphi na ixesha kwaye ukuba kuyimfuneko, ndingamisela igcisa kunye / okanye umgcini wendlu ukuba angenelele kwindawo yokuhlala ngexesha lokuhlala kwakho.
Ndingakunika ulwazi ngefowuni ngaphambili, ngexesha lokuhlala kwakho nasemva kohambo lwakho. Andihlali kwipropathi, kodwa ndihlala imizu…